Wasiirka Caddaalada oo ka hadlay qiimaha ay nabadgelyadu u leedahay Bulshada | Somaliland.Org
Wasiirka Caddaalada oo ka hadlay qiimaha ay nabadgelyadu u leedahay Bulshada
January 13, 2013	Hargeysa, (Somaliland.Org) Wasiirka Wasaaradda Caddaalada Somaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa bulshada Somaliland ugu baaqay in dhallinyarada ay ku wacyigaliyaan dariiqa toosan iyo nabadgelyada.
Wasiirka oo ka hadlayay riwaayad ka turjumaysa nabadgalyada oo ay soo diyaariyeen kooxda (Samo Talis) ee Ciidanka Asluubta Somaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasibadaas oo ay ka qaybgaleen Wasiirrada Wasaaradaha Gaashaandhigga, Wasiirka Ciyaaraha, Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Taliyaha iyo Taliye ku-xigeenka Ciidanka Asluubta Somaliland iyo marti sharaf kale, waxa ugu horeyn ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Caddaalada Xuseen Axmed Caydiid, waxaanu yidhi. “Bulshada reer Somaliland way soo aragtay balaayo in ugu filan labaatan sano iyo ka horba, waxaana dhamaanteen inagu waajib ah inaynu ka hortagno meeshii ay dhibaato ka soo socoto, aqoonteedana waynu leenahay.”
Wasiirka Caddaalada Xuseen Axmed Caydiid isagoo hadalkiisa sii wata lana hadlaya dhallinyarada waxa uu yidhi. “Waxaad moodaa in bahashii la odhan jiray balaayo oo imika ku wareegayso dhallinyarada ay da’doodu tahay 20 jirka tahay oo iyagu aan ka warqabin wixii ay ummaddani soo martay dhibaato, mar ay badaha isku guraan, mar ay waalidiintooda wadooyinka isu taagaan, mar ay iyagu islaayaan imika waxaad moodaa in bahashaa balaayo la yidhaa ay ku shaqaysanayso dhallinyaradeenii.” Waxa kale oo uu bulshada Somaliland ugu baaqay Wasiirka inay dhallinyarada ay ku wacyigeliyaan dariiqa toosan ee naftooda iyo bulshadaba wax taraya. Waxa kale oo sheegay in xukuumada uu ka tirsan yahay ay ciidanka Asluubta iyo kooxdooda Samo Talisba oo wixii itaalkooda ah aanay ka hagran qarankuna uu u ogyahay hawsha ay u hayaan.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Somaliland Maxamed Xuseen Faarax (Xiirane) oo isna ka hadlay bandhig faneedka ay soo diyaarisay kooxda Ciidanka Asluubta ee (Samo Talis) ayaa yidhi. “Marka laga yimaado dhismaha Ciidanka Asluubta oo maanta laga yaqaano ciidamada kale ee qaranka intii aanu xilkiisa la wareegnay laba sano ka hor waxaanu qaadanay ardaydii caafimaadka ee ka soo baxday Jaamacadaha si caafimaadka askarta iyo maxabiista jeelasha ku jirtaa ay caafimaad u helaan, waana qorshe ay xukuumaddu nala wado.”
Taliyuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi. “Waxa noo qorshaysan in dhamaan jeelasha maxaabiista ku jirta aanu dhaqan-celin fiican iyo xirfado aanu barno intii karaankeena ah, warshadihii filinjarka ee Madheera iyo Hargeysa ay shaqeeyaan dhawaan haddii Alle yidhaahdo.”
“Xukuumaddu waxay noo dhistay xabsigii Laascaanood oo markii hore dhibaato naga haysatay inta kabba maxaabiis laga soo qaadi jiray imika si fiican ayuu u shaqeeyaa.”
Taliyaha Ciidanka Asluubta Maxamed Xuseen Faarax (Xiirane) Waxa kale oo uu sheegay in sanadka cusub uu miisaaniyada ugu jiro in dib-u-dhis lagu sameeyo jeelka Burco.
“Waxa kale oo aanu dhisnay koox kubada koleyga ah oo ilaa hada qaaday shan koob, maayarada magaalooyinka waaweyn waxaanu ka codsanaynaa inay iibiyaan min hal iska rogo oo lagaga faa’iidaysto maxaabiista.”
Previous PostXusni Mubaarig oo dib Loo MaxkamadeynayoNext PostSirdoonka Soomaaliya Oo Sheegay In Sarkaalkii Faransiiska ahaa ee u af-duubnaa Al-shabaab uu dhintay	Blog